MDC T Yotarisirwa Kuita Sarudzo Dzekutsvaga Vachamirira Bato Iri
WASHINGTON DC — Bato reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, rinoti richatanga neChishanu svondo rino sarudzo dzekutsvaga vacharimirira bato iri musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino.
Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muMDC T, VaNelson Chamisa, vanoti sarudzo idzi dzichatanga mumatunhu asina vamiriri vanobva kubato iri, dzozoenda mumatunhu ari kumirirwa nenhengo dzebato iri kana chete nhengo idzi dzatadza kuwana rutsigiro rwunodiwa kubva kuhutungamiri hwebato mudunhu mavo.
VaChamisa vanotiwo bato ravo rakarambidza nhengo dziri kuda kukwikwidza musarudzo idzi kutsvaga rutsigiro mumatunhu ane vamiriri varo kare, vachiti izvi zvinokanganisa nhengo dzirimo idzi kushandira vanhu vakadzisarudza. Vanotiwo vanoda kutanga vapedza nezvebumbiro remitemo ravakatarisana naro.
Asi vamwe mubato iri vari kuda kukwikwidza vanonzi havasi kufara nazvo, sezvo vari kuzviona senzira yekuchengetedza vamiriri ava pazvigaro, kunyange vachizivikanwa kuti havana zvavari kuita mumatunhu avo.
Mumwe mutemo unonzi hausi kufadza vamwe mubato iri ndewekuchengetera madzimai zvigaro, uyo unonzi unotadzisa vamwe vane pfungwa itsva kupindawo mudariro.
Ukuwo, bato reZanu PF rakatarisirwawo kugara pasi svondo rino kuti rizeye nezvenyaya yesarudzo idzi.
Studio7 haina kukwanisa kubata mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, kuti tinzwewo pasvika bato ravo nezvehurongwa hwesarudzo idzi.
Asi vane ruzivo nezviri kuitikawo mubato iri vanoti hamuna kugadzikana nekuda kwenzira dzakatarwa dzekutsvaga nadzo vacharimirira musarudzo, idzo dzinonzi dziri kurambwa nevamwe vakuruvakuru vebato, izvo zvatadzisa kuti patarwe zuva resarudzo.